Maxaa ka soo baxay shirweynihii beesha Hawiye ee Muqdisho lagu qabtay ? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maxaa ka soo baxay shirweynihii beesha Hawiye ee Muqdisho lagu qabtay ?
Maxaa ka soo baxay shirweynihii beesha Hawiye ee Muqdisho lagu qabtay ?
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhamaaday shir hal maalin socda oo ay ku yeesheen wax-garadka iyo odayaasha dhaqanka beelaha hawiye, kaastoo ugu danbeyntii laga soo saaray war-murtiyeed ka kooban 14 qoddob.
Maqaal horeMadaxweyne Farmaajo oo aqbalay dalab la xiriira doorashada ugana yimid Qoor Qoor
Maqaal XigaTalaabo nuucee ah ayey soomaliya qaadi doontaa ka dib heshiiskii Qatar iyo Sacuudiga ?